Labo diyaaradood oo maanta isku dhacay garoonka magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Labo diyaaradood oo maanta isku dhacay garoonka magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa maanta oo Sabti ah garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka dhacay shil diyaaradeed oo sababay khasaaro burbur ah.
Shilkaas ayaa la sheegayaa inuu yimid, kadib markii ay isku dhaceen labo diyaaradood oo mid ka mid ah ay leeyihiin Midowga Yurub, halka mida kale ay tahay diyaarad nooca rakaabka qaada ah oo ay leedahay shirkad lagu magacaabo Galeyr, taas oo isaga kala gooshta gobolada dalka.
Diyaarada sababtay shilkaasi ayaa xilligaasi rabtay inay gasho meelaha la dhigo diyaaradaha yimaada ee Parking-ka, waxayna qeybta wadada weyn ugu tagtay diyaarad kale oo xilligaasi taagneyd, sidaasina uu shilka ku dhacay.
Muuqaalo sawirro ah oo laga soo qaaday shilka labada diyaaradood ayaa muujinaya baalasha diyaarada rakaabka ahayd oo burbursan, taas oo xillilgaasi sugeysay inay maanta garoonka ka qaado dad rakaab ah.
Sidoo kale, muuqaalka laga soo qaaday shilkaasi diyaaradeed ayaa muujinaya in labada diyaaradood ay ka daateen shidaal badan, taas oo ugu wacnayd shilka ka dhex dhacay.